श्रीमान अफिस गएको बेला श्रीमतीले घरमै पर’पु’रुषसँग म’स्ती गर्दा… भयो य्स्तो!!! – News Nepali Dainik
श्रीमान अफिस गएको बेला श्रीमतीले घरमै पर’पु’रुषसँग म’स्ती गर्दा… भयो य्स्तो!!!
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: १३:४२:४१
विवाहेत्तर स’म्ब’न्धका कारण धेरैका घरमा समस्या आएका छन् । आफ्नो परिवारसंग सन्तोष नभएर अर्कालाई ता क्दा एक पुरुषको ज्या’न गएको छ । श्रीमान नभएको बेलामा अर्का पुरुषलाई घरमै बोलाएर रोमान्स गरेकै बेलामा श्रीमान आइपुगेपछि भा ग्ने क्रममा पाँचौं तलाबाट हा’म फा’ल्दा पुरुषको ज्या’न गएको छ । यो घ’टना भारतको दिल्लीको हो।
दक्षिणी दिल्लीको टिग्री क्षेत्रमा रहेको जेजे कोलोनीमा बसोबास गर्दै आएका ती पुरुषलाई आ’पत्तिजनक अवस्थामा ती महिलाका श्रीमानले भेटेका थिए । ढोकामा चुकुल लगाउन समेत विर्सिएर उनीहरु एक अर्कामा लि प्त हुँदै थिए । त्यही बेलामा श्रीमान आएको पनि थाहा पाएनन् ।जब श्रीमानलाई ढोकामा देखे ति पुरुष हतार हतार भा ग्ने क्रममा भवनको पाचौं तल्लाबाट हाम फाले । उनलाई घा’इते अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । तर अस्पतालमा लगिएपनि उनको ज्या’न भने जोगिएन । श्रीमानले रं’गे’हा’त देखेपछि देह त्या’ग गर्ने प्र’या’स गरेकी श्रीमती भने जोगाइएको छ ।
Last Updated on: February 6th, 2021 at 1:42 pm